7w 15w 25w 35w 50w Elephant trunk amboaran'ny LED downlight,Mamelatra Ny Hazavana,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - Shina 7w 15w 25w 35w 50w Elephant trunk amboaran'ny LED downlight, Manufacturer & Supplier
7w 15w 25w 35w 50w Elephant trunk amboaran'ny LED downlight. Ny fahazavana na ny hazavana nipongatra (koa ny hazavana vita amin'ny hazavana amin'ny teny Anglisy Kanadiana, indraindray dia afaka hazavana (ho an'ny hazavana kaneraly) amin'ny teny Anglisy Amerikanina) dia fitaovana mamirapiratra izay napetraka ao amin'ny fanokafana lavaka ao amin'ny valindrihana. Rehefa napetraka dia toa misy hazavana mamirapiratra avy eo amin'ny lavaka eo amin'ny valindrihana, mifantoka amin'ny hazavana amin'ny tontolon'ny tondradrano toy ny fipoahana lehibe na tery tery. Ny karazana angovo mahomby mametaka LED, jiro kilan'ny LED izay manome endrika sy fahatsinjovana maoderina. Ny fahazavana ao anatin'io karazana io dia tena mahomby amin'ny angovo azo avy amin'ny fiainana maharitra, mamela vola be dia be amin'ny faktioran'ny angovo sy ny vidin'ny lamosina fanoloana ary manome ny hazavana avo lenta. Ny tarika hazavana sy ny jiro manda no loharano rehetra.( 7w 15w 25w 35w 50w Elephant trunk amboaran'ny LED downlight )
7w 15w 25w 35w 50w Elephant trunk amboaran'ny LED downlight
©2005-2018 Karnar Mifandraisa aminay Site map Last modified: April 25 2019 04:05:01.